lundi, 23 septembre 2019 14:03
Rugby - Kianja Makis Andohatapenaka: Ny fanatanjahan-tena mandeha, ny fitaizana ara-pahasalamana mandeha
Notanterahina teny amin’ny Kianja Makis Andohatapenaka - Antananarivo ny faran’ny herinandro teo ny "Tournoi Rugby Santé féminine", nokarakarain'ny Tanora Garan'Teen sy ny Malagasy Rugby. Mpiahy ity hetsika ity i Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, minisitry ny serasera sy kolontsaina. Nilaza ity farany fa « Zava-dehibe loatra ny fanatanjahan-tena ho an'ny vehivavy, satria sady mitaiza ny vatana no mitaiza ny saina no mitaiza ara-piaraha-monina ». (Jereo Sary Tohiny)
Lalao telo indray no vita androany, andro fahatelo, amin’ny fiadiana ny tompondaka erantany amin’ny taranja baolina lavalava, tanterahina any Japon. 35 noho 3 no nandresen’i Angletera an’i Tonga. Nivoaka mpandresy tamin’ny isa 47 noho 22 i Italia nanoloana an’i Namibia. 27 noho 3 ihany koa no nisarahan’i Irlandy sy Ecosse. (Jereo Sary Tohiny)
samedi, 21 septembre 2019 19:53
Kitra - COSAFA U17 vehivavy: Botswana 6 - 0 Madagasikara
Niondrika tamin’ny isa mavesatra 0 noho 6 i Madagasikara androany nanoloana an’i Botswana, tamin’ny lalao voalohany natrehiny tatsy amin’ny nosy Maorisy, amin’ny fiadiana ny tompondakan’ny faritra atsimon’i Afrika eo amin’ny baolika kitra, sokajy vehivavy latsaky ny 17 taona (COSAFA U17). Nomontsanin’i Afrika Atsimo tamin’ny isa mavesatra 28 noho 0 kosa ny tovovavin’i Seychelles, izay samy lalao tao amin’ny vondrona B. (Jereo Sary Tohiny)
samedi, 21 septembre 2019 19:39
Rugby – Tompondaka erantany: Nibata fandresena i Frantsa, Aostralia ary Nouvelle-Zélande
Lalao telo no tontosa androany sabotsy 21 septambra 2019, andro faharoa amin’ny fiadiana ny tompondaka erantany amin’ny taranja rugby, andiany faha-9 atao any Japon. Nivoaka mpandresy tamin’ny isa 23 noho 21 i Frantsa nanoloana an’i Arzantina. 23 noho 13 no nandavoan’i Nouvelle-Zélande an’i Afrika Atsimo. Nibata fandresena 39 noho 21 ihany koa i Aostralia nanoloana an’i Fiji. (Jereo Sary Tohiny)
vendredi, 20 septembre 2019 15:02
Rugby – Tompondaka erantany: Japon vs Rosia no nanokatra ny lalao androany
Tanterahina any Japon manomboka androany 20 septambra 2019 ny fiadiana ny tompondaka erantany amin’ny taranja rugby lalaovin’olona 15. Ny fihaonan’i Japon mpampiantrano sy Rosia, ao amin’ny sokajy A, no nanokatra ny lalao androany. Eo amin’ny andiany faha-9 izao ny fifaninanana, izay tanterahina isaky ny efa-taona, ary sambany izany no tanterahina any amin’ny kaontinanta aziatika. Tsy hifarana ity fifaninanana ity raha tsy amin’ny 2 novambra 2019, amin’izay no hahafantarana izay handimby an’ny All Blacks avy any Nouvelle-Zélande, tompondaka farany tamin’ny 2015 tamin’ny andiany faha-8 natao tany Angletera. I Frantsa no hampiantrano ny andiany faha-10 amin’ity fiadiana ny tompondaka erantany amin’ny rugby ity amin’ny 2023.
jeudi, 19 septembre 2019 19:56
Kitra – Filaharan’ny FIFA: Faha-95 maneran-tany i Madagasikara
Nahazo toerana iray, ary eo amin’ny faha-95 maneran-tany i Madagasikara, araka ny filaharan'ny ekipam-pirenena maneran-tany navoakan’ny Federasiona iraisam-pirenena amin’ny baolina kitra (FIFA), tamin’ity volana septambra 2019 ity. Faha-21 i Madagasikara aty Afrika, faha-3 aty atsimon’i Afrika, ary voalohany eto anivon’ny Ranomasim-be indianina.
jeudi, 19 septembre 2019 19:08
Kitra CHAN: Barea vs Brave Warriors
Vonona tanteraka ny Barea hiatrika ny lalao mandroso hihaonany amin'ny Brave Warriors Namibiana etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina amin'ny alahady 22 septambra izao. Ny alahady manomboka amin'ny 7ora30 ny fivarotana tapakila ary amin'ny 8ora no hisokatra ny vavahady idirana ao Mahamasina. Izay tafavoaka amin’ny lalao mandroso sy miverina amin’ireto ekipa ireto no hahazo ny tapakila amin’ny dingana famaranana amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika ifaninanan’ireo ekipam-pirenena rafetin’ireo mpilalao milalao ao an-taniny na CHAN 2020 hatao any Cameroun.
Sady handray ny fifantenana ireo mpilalao handrafitra ny ekipa nasionaly Barea i Nicolas Dupuis, no handray an-tanana ihany koa ny fampiroboroboana ny baolina kitra eto Madagasikara amin'ny ankapobeny, amin’izao nanendren’ny Federasiona azy izao ho Tale teknika nasionalin'ny baolina kitra eto Madagasikara izao. Nisy androany maraina ny fihaonan'ny filohan'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra Rabekoto Arizaka Raoul sy Nicolas Dupuis tao amin’ny biraon'ny federasiona tetsy Isoraka, Antananarivo.
Nifarana omaly ny Rallye Tour de Tanà nokarakarain’ny Asa Tana. Andiany faha-19 ny tamin’ity, 30 ny fiara nandray fiaingana. Niala an-daharana avokoa ny androatokony. Nibata ny fandresena i Fred sy Andry Tahina avy amin'ny klioba ASACM, nitondra Subaru Impreza, narahin’i Rivo sy Ando (FMMSAM - Subaru Impreza). Ny ekipazy Sitraka sy Rado (FMMSAM - Subaru Impreza) no teo amin’ny laharana fahatelo. (Jereo Sary Tohiny)